မဒမ်ကိုး: အသားအရည်လှပဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေထိန်းသိမ်းစို့
မဒမ်ကိုးတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ခုတလောတင်သိန်းအေးမတင်ဘဲကျားထောင်ချောက်မဆက်ဘဲအလှအပရေးရာတွေချည်းတင်နေပါလိမ့် တော်တော်လှချင်နေတယ်လို့ဆိုရင်သုံးဆယ်နဲ့လေးဆယ်ကြားမှာရှိနေတဲ့လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လှပဖို့ထက် ဈေးကြီးတဲ့အလှအပပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ထက်သဘာဝနည်းနဲ့ကျန်းမာလှပလာအောင်လုပ်ဖို့ပဲပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်နေမိတာအမှန်ပါ။
ဗိုက်လေးကပူခါးကတုတ်၃၀ ကျော်ပြီဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလိုစားသမျှပြန်မထွက်တော့ဘဲဗိုက်နဲ့ခါးမှာအဆီကစု၊နဂိုကမှချူခြာရတဲ့အထဲအသက်လေးကရလာတော့ကျန်းမာရေးကဂဂျိူးဂကြောင်ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ကျန်းမာရေးစာပေတွေဖက်ကိုလှည့်မိတာဖြစ်ပါတယ်။၀က်ဆိုက်တွေကနေရှာဖွေဖတ်မိလာသမျှ အသားအရည်အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်သိလာရသမျှလေးတွေအတိုအထွာလေးတွေမျှဝေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုတလောဘာသာပြန်တွေတင်နေမိကြောင်းကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။
အသားအရည်လှပဖို့ထိန်းသိမ်းရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခုလိုချိန်ခါမျိုးမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ ထောင်သောင်းချီနေတဲ့အလှအပထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်း တွေကရောသင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုတကယ်လှပလာအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်လို့များကတိပေးနိုင်လို့လား။ တကယ်တော့ပိုးသားလေးလိုနူးညံ့ချောမွတ်ပြီးတောက်ပတဲ့အသားအရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသင်သုံးစွဲနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေတင်မကဘဲကိုယ်ခန္ဒာမှာလိုအပ်တဲ့အဟာရဓာတ်တွေကိုပြည့်စုံလုံလောက်စွာဖြည့်တင်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရည်လှပကျန်းမာလာအောင်ခုပြောပြမယ့်အစားအစာဆယ်မျိုးကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံလှပတဲ့အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာမလွဲပါဘူ။
1. Red Bell Peppers လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းငရုတ်ပွသီး
2. Dark Chocolate ( ချောကလက်အနက် )
ချောကလက်အနက်ရောင်ဟာantioxidantsနဲ့Fattyacids တွေအများဆုံးပါဝင်တာကြောင့်အသားအရေကိုကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ချောကလက်အနက်ရောင်မှာပါဝင်တဲ့antioxidantsဓာတ်ပေါင်းတွေဟာအသားအရေကြမ်းတမ်းခြင်းကိုလျော့ချပေးနိုင်ပြီးသင့်အသားအရေနေလောင်ခံရပြီးပျက်စီးခြင်းမှလဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တနေ့ကိုနည်းနည်းစီစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့သွေးကြောမျှင်လေးတွေကိုကောင်းမွန်စွာအထောက်အပံ့ပေးစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှု့ကိုကောင်းမွန်စေလို့ ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ်မယ်။
3. Salmon ဆယ်မွန်ငါး
နောက်ပြီးomega3fattyacids တွေ ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာမို့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ခြင်း၊ပါးရေတွန့်ခြင်းနဲ့ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းတွေအတွက်ပါကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။omega3ပါဝင်နုန်းများပြားတဲ့အတွက်အသားအရေရဲ့အစိုဓာတ်ကိုလဲထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီးဦးရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကိုလဲထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ဆံပင်တွေအဖြစ်ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
အုန်းဆီဟာကယ်လိုရီ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ ပြည့်ဝဆီဖြစ်ပြီးသူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့Lauricacidပိုးသတ်နိုင်နှုန်းမြင့်မားပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ပိုးမွှားဝင်ရောက်ခြင်း၊အရေတွန့်ခြင်းနဲ့ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အုန်းဆီမှာFattyacidနဲ့ဗီတာမင်Eအဓိကပေါများစွာပါဝင်တာကြောင့်သင့်ရဲ့အသားအရေစိုပြေမှု့နူးညံ့မှု့နဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ သဘာဝအုန်းဆီကိုအရေပြားပေါ်မှာပုံမှန်တနေ့ကိုစားပွဲတင်ဇွန်းတဇွန်းလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။အုန်းဆီဟာအကျိတ်အဖုတွေအတွက်လဲအင်မတန်မှဆေးဖက်ဝင်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင်ကိုယ်အလေးချိန်ပါကျဖို့အကူအညီပေးနိုင်ပါသတဲ့။အရမ်းကိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွက်ကဲသင်ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ဖြေကြည့်ခဲ့ပါဦနော်။
5. Green Tea လက်ဖက်ရည်စိမ်း
အများသိကြတဲ့အတိုင်းဘဲGreenTeaလို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ရည်စိမ်းကနေရရှိတဲ့antioxidants,aminoacidနဲ့Ltheanine ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာသင့်ခန္ဒာကိုယ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု့တွေလျော့ချစေနိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်စွာအနားယူနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GreenTeaဟာကင်ဆာနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်မှု့တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးတိုးနှုန်းကိုလည်းလျော့ချထိန်းညှိပေးပါတယ်။တနေ့ကိုသုံးခွက်ကန်ေပုံမှန်သောက်မယ်ဆိုရင်တော့သင့်ကျန်းမာရေးမှာကောင်းမွန်တဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မြန်မာပြည်မှာတော့ လက်ဖက်ခြောက်ကိုရေနွေးကြမ်းလုပ်လို့တနေကုန်သောက်ကြတဲ့သူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြတာစာရေးသူရဲ့အဖွားကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ခုထိအသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်ပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေဆဲပါ။
6. Spinach ဟင်းနုနွယ်
သူမှာပါဝင်တဲ့antioxidants ဒြပ်ပေါင်း တွေရဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေဗီတာမင်စီ၊အီး၊အေ တွေကအထူးသဖြင့်တော့သင့်ရဲ့အရေပြားအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဟင်းနုနွယ်မှာပါဝင်တဲ့Antioxidants ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာအရေပြားဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးမျိူးကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေရှိနေပါတယ်။သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အစားအသောက်ထိန်းချူပ်မှု့မှာဟင်းနုနွယ်ကိုနေ့စဉ်ဖြည့်စွက်စားပြီးဘာအကျိုးရလာမလဲလို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။သန့်ရှင်းကြည်လင်တဲ့အရေပြားကိုသင်ဟာမကြာခင်မှာပိုင်ဆိုင်လာရမှာဖြစ်ပြိး သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဒာအတွင်းပိုင်းကိုလဲ များစွာအထောက်အကူပြူစေကြောင်းသင်သိလာပါလိမ့်မယ်။
7. Seeds ( အစေ့များ )
နေကြာစေ့၊ဖရုံစေ့၊သခွားစေ့၊နှမ်းမဲစေ့အစရှိတဲ့အစေ့တွေဟာအသားအရေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အစေ့တွေဖြစ်ပြီးselenium,VitaminE,magnesium and,proteinဓာတ်တွေအင်မတန်ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ Selenium and protein ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာအသားအရေတွန့်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးဗီတာမင်Eကတော့သင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုစိုပြေလှပစေမှာဖြစ်ပါတယ်။magnesiumဓာတ်ကတော့သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးနေမှု့တွေကိုလျော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ Omega3fatty acids တွေပါဝင်တဲ့ flax, chia and hemp လို့ခေါ်တဲ့အစေ့တွေ(ပုံမြင်ဖူးပြီးဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိတဲ့အစေ့တွေမဲမဲလေးတွေ)ဟာသင့်မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့ဝက်ခြံတွေကိုအကောင်းဆုံးတိုက်ဖျက်ပေးမယ့်ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲဒီအစေ့တွေမှာပရိုတိန်းဓာတ်အများအပြားပါဝင်နေပါတယ်။ ဘာဂါလိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေမုန့်တွေပေါ်မှာဖြူးလေ့ရှိတဲ့sprinkleseedsဟာဆိုရင်အရသာရှိသလိုအကောင်းဆုံးအသားအရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျန်တာတွေအလွယ်တကူမရရင်တော့လည်းဖရုံစေ့ကွာစေ့နေကြာစေ့တွေသာအလွယ်ကူဆုံးမို့အဲဒါတွေစားလေ့ရှိတဲ့မိန်းခလေးတွေနဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်၊အပေါ်မှာအဲဒီအစေ့လေးတွေကိုမြင်ဖူးအောင်တော့ ပြထားလိုက်ပါတယ်နော်။
8. Celery ( တရုတ်နံနံပင် )
နောက်ထပ်သင့်အသားအရည်ကိုလှပအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကတော့Celeryလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နံနံပင်ရဲ့အရိုးကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသီးအရွက်တော်တော်များများမှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်သဘောသဘာဝတွေကိုယေဘူယျသိထားကြပေမယ့်ခုCeleryမှာတော့VitaminKဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု့ကိုပုံမှန်ထိန်းပေးနိုင်သလို သွေးတိုးခြင်းကိုလဲလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှု့တွေကိုလျော့ချပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသားအရည်ညိုးနွမ်းခြင်းတွေ၊ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်တာတွေနဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တာတွေကိုပါကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Celeryမှာသဘာဝဆိုဒီယမ်၊ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ရေဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပြန်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့အသားအရည်ဟာမွဲခြောက်နေမယ်၊အရေတွေတွန့်ရှုံ့နေမယ်နောက်ဆုံးမှာအသားအရည်တွေကွဲအက်ခြောက်သွေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ဒီအသီးအရွက်ကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ်ရက်ခြားစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။အကယ်၍များသင်ဟာအစားအသောက်တွေကိုကယ်လိုရီပါဝင်နှုန်းတွက်ချက်စားနေတဲ့သူဆိုပါလျှင်တော့မပူပါနဲ့။ဒီcelery တွေဟာကယ်လိုရီပါဝင်မှု့အနည်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
9. Papaya ( သဘောင်္သီး )
သဘောင်္သီးဟာအံသြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲအကျိူးပြုအဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝနေတဲ့အသီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာကယ်လိုရီပါဝင်နှုန်းအရမ်းကိုနည်းပါးပြီး100ဂရမ်ကိုမှ39ကယ်လိုရီသာပါဝင်ပြီး ကော်လက်စရောလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။အကယ်၍များသင်ဟာဝိတ်ချနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုပါရင်တော့သဘောင်္သီးကိုနေ့စဉ်စားသုံးဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။သဘောင်္သီးမှာfructoseဓာတ်ပါဝင်မှု့နည်းပါး ပြီးအစာခြေဖျက်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုစေပါတယ်။ Antioxidantအဟာရဓာတ်တွေကိုလည်းသဘောင်္သီးကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဘီတာကယ်ရိုတင်း၊ဗီတာမင်Cနဲ့Eဟာအရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝက်ခြံတွေပေါက်ခြင်းကိုလဲလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီကလည်းသင့်အသားအရည်ကိုနေလောင်ပျက်စီးခြင်းကနေကာကွယ်ပေးစေပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလွယ်တကူရှာရနိုင်တဲ့သဘောင်္သီးကိုစားဖို့မမေ့ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
10. Carrots ( မုန်လာဥနီ )
မုန်လာဥနီဟာသင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေတခုတည်းတင်ကောင်းမွန်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။သင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုပါလှပကောင်းမွန်စေပါတယ်။မုန်လာဥနီဟာဗီတာမင် အေဓာတ်ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေသလိုဘဲသင့်အရေပြားရဲ့အပြင်လွှာကဆဲလ်တွေကိုပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်းကနေလဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဆဲလ်အသေတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့နဲ့အဆီခဲလေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်အေဓာတ်ဟာအရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကိုလျော့ချပေးနိုင်တာမို့တနေ့ကိုBabyCarrotလို့ခေါ်တဲ့မုန်လာဥသေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သာမာန်မုန်လာဥအနည်းကိုပုံမှန်လေးစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ချောမွေ့လှပတဲ့အသားအရည်ကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
21 အောက်တိုဘာ 2014
နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်
တကယ်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ သဘာဝကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ..ဆေးတွေပဲမှီဝဲနေမယ့်အစား သဘာဝသစ်သီးသစ်ဖုအရွက်တွေကိုပိုစားသင့်တယ်ထင်တယ်
ဟင်းနုနွယ် မုန်လာဥနီ ကြိုက်သကွဲ့ တော်တော်လဲ စားဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပါ့ မဒမ်ရေ...။ အသက် ၃၀ ကျော်လာတော့ ဗိုက်ကလဲ ပူလာပါရဲ့။ ခါးကလဲ တုတ်လာပါရဲ့။ ဒီကြားထဲ ရုံးမှာ ကွန်ပျူတာရှေ့ တနေကုန်ထိုင်နေရတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဟင်းနုနွယ်၊ ပန်းငရုပ်ပွ၊ မုန်လာဥနီတွေကတော့ ခဏခဏစားဖြစ်တဲ့အစားစာတွေပါပဲ။ နေကြာစေ့၊ ကွာစေ့တွေကတော့ စားပြီးရင်ခေါင်းမူးလို့ ကြိုက်ပေမဲ့ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ ချော့ကလက်လဲ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး၊ ထန်းလျှက်ခဲပဲစားဖြစ်တယ်။ :P ရေနွေးကြမ်းကတော့ ရုံးမှာ ကော်ဖီမသောက်ပဲ ရေနွေးကြမ်းပဲသောက်တယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် မမေ့မလျှော့နဲ့ များများ ဝယ်လာဖြစ်တာ လက်ဘက်မွှေးရွက်ကလေးတွေပေါ့။ ရေနွေးကြမ်းမွှေးမွှေးလေးကို တအားကြိုက်လို့လေ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေက ကိုယ့်ကို အဲ့လောက်အကျိုးပြုမှန်း သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ ခုတော့သိရပြီ ကျေးဇူးအထူးပါမဒမ်။
သဘောင်္သီး-ဟင်းနုနွယ်-ဆယ်မွန်ငါး -အဲတာတွေကြိုက်တယ် လှလဲလှချင်တယ် အချိန်လဲမပေးနိုင် ခက်လှပါတယ်----အဲဒီ ၃ မျိုးကတော့အမြဲလိုလိုစားဖြစ်တယ်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့ စ်လေးပါပဲ
ဘယ်အရွယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်လှချင်ကြတာမို့ 
အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်လို့ 
စာဖတ်သူတို့အတွက် စေတနာထားပြီး စိတ်ရှည်စွာ ရေးသားဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ပညာပေးပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မဒိုးရေ... အသက်အရွယ် ကြီးကြီးငယ်ငယ် ဖတ်သင့်တဲ့ပို့စ်လေးပဲ။ နေပြည်တော် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် အခုမှဖတ်ဖြစ်တယ်။ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် :)
Well over 160000 men and women are utilizingaeasy and secret "liquids hack" to lose 2lbs each night in their sleep.
and become 2lbs thinner in the morning!
စိတျဖိစီးမှု လြော့ကစြနေညျး (၁၀)ခကျြ...
Security Features and Tips အပိုင်း-၈